Ngale mini u-Isaac Asimov, isazi sebhayoloji kunye nombhali wazalwa | Uncwadi lwangoku
U-Isaac Asimov ukhunjulwa ngaphezu kwayo yonke into ngenxa yegalelo lakhe elikhulu kwezenzululwazi, ngenxa yophando kunye nezincoko, kodwa wayekwangumbhali weentsomi. bucala ngasekhohlo umbhali kunye nesazi sebhayoloji, isiqingatha isiRashiya, isiqingatha saseMelika (wayenobumi bobabini), Wazalwa ngosuku olufana nanamhlanje, nge-2 kaJanuwariokanye, kodwa ukusukela ngonyaka we-1920, eRashiya, ngakumbi e-Petrovichi, kodwa kuphela xa wayeneminyaka emi-3 ubudala wafudukela nosapho lwakhe eNew York, e-USA.
Waphumelela kwiBiochemistry kwiYunivesithi yaseColumbia emva koko wagqiba isidanga se-chemistry awasigqiba ngo-1941, kwakwiyunivesithi enye, eyayizokumnceda ukuba afumane umsebenzi wokuba ngumphandi wemichiza kwi-US Navy, kwiiyadi zayo. Kwiminyaka kamva, wafumana isidanga sobugqirha kwiKhemistry kwaye waba yinxalenye yabasebenzi bokufundisa IYunivesithi yaseBoston.
Ukushiya bucala ubomi bakhe bobungcali kwaye eqhubeka nokuthetha ngecala lakhe lokuyila kunye nokubhala, wayekwangumbumbi wemisebenzi yesayensi kunye nembali. Umsebenzi wakhe "Isiseko", kwaziwa njenge Trilogy o Umjikelo weTrantor, esinamavolontiya angaphezulu kwama-500, sinokufumana zombini imisebenzi eyimfihlakalo kunye nezicatshulwa ezingeyonyani. Yedwa URober A. Heinlein kunye noArthur C. Clarke Banokugubungela u-Asimov, kuba bobathathu babonwa njengababhali ababalaseleyo beentsomi ngalo mzuzu.
Njengedatha enomdla, siza kuthi i-movie mna, iRobot yayisekwe kumsebenzi ka-Asimov kwaye ngo-1981 i-asteroid 5020 iya kuthiywa ngaye.
Ndiza kufa ndineminyaka engama-72 kwakule dolophu inye eyayibambeleyo, eNew York.
Iingcaphuno ezili-10 zika-Isaac Asimov kunye nevidiyo
"Okokuqala, masilahle uSocrates, kuba sele ndidikiwe yile nto yokuba ukungazi nto luphawu lobulumko."
"Ebomini, ngokungafaniyo nechess, ubomi buyaqhubeka nasemva kokujonga."
"Inye kuphela imfazwe abantu abanokuyivumela: imfazwe ngokuchasene nokupheliswa kwabo."
Akukho nto iguqula uxinzelelo lwam. Unokuba ne-orgy eofisini yam kwaye andizukubukela. Ewe, mhlawumbi kube kanye.
"Ndiqinisekile ukuba ukuzifundisa kuphela kolona hlobo lwemfundo olukhoyo."
"Kwam, ukubhala ndicinga nje ngeminwe yam."
"Ukuzinikela ekungazini nasekukhankanyeni uThixo bekusoloko ngaphambi kwexesha, kwaye kusengaphambi kwexesha nanamhlanje."
Ndingumntu ongakholelwa kubukho bukaThixo ongagungqiyo. Kuthathe ixesha elide ukuyithetha. Bendingakholelwa kubukho bukaThixo iminyaka kunye neminyaka, kodwa ngandlela thile bendivakalelwa kukuba yayikukungahloniphi ngokwengqondo ukuba umntu athi akakholelwa kubukho bukaThixo, kuba ucinga ukuba unolwazi olungenamntu. Ngandlela-thile, kwakungcono ukuthetha ukuba umntu wayengumntu okanye i-agnostic. Ekugqibeleni ndaye ndagqiba kwelokuba ndisisidalwa esineemvakalelo kunye nesizathu. Emoyeni, andikholelwa kubukho bukaThixo. Andinabo ubungqina bokuba uThixo akakho, kodwa ndinesikrokro esiqatha sokuba Akakho kangangokuba andifuni nokuchitha ixesha lam ngaso. "
"Ungaze uvumele imilinganiselo yokuziphatha ikuyekise ukwenza into elungileyo."
"Into ebuhlungu ebomini ngoku kukuba isayensi iqokelela ulwazi ngokukhawuleza kunokuba uluntu luqokelela ubulumko."
Emva koko, sikushiya nesiqwenga sodliwanondlebe esenziwe kumbhali, apho wabona kwangaphambili Iziphumo kwi-intanethi kubomi babantu:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ngale mini wazalwa uIsake Asimov